"Aniga Ayaa Rumaysan Waayey..." - Fabio Capello Oo Sharraxay Heshiiskii Qarniga Ee Roberto Carlos Ee 24ka Daqiiqadood Kusoo Dhamaaday - Laacib
HomeSuuqa Kala Iibsiga“Aniga Ayaa Rumaysan Waayey…” – Fabio Capello Oo Sharraxay Heshiiskii Qarniga Ee Roberto Carlos Ee 24ka Daqiiqadood Kusoo Dhamaaday
“Aniga Ayaa Rumaysan Waayey…” – Fabio Capello Oo Sharraxay Heshiiskii Qarniga Ee Roberto Carlos Ee 24ka Daqiiqadood Kusoo Dhamaaday
April 28, 2021 Abdiwahab Ahmed Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga 0
Fabio Capello ayaa ahaa tababaraha Real Madrid markii ay Los Blancos lasoo saxeexatay halyeyga reer Brazil ee Roberto Carlos sannadkii 1996kii, iyadoo uu waliba waqti kooban uun joogay Inter Milan.
Real Madrid ayaa nasiib u yeelatay in ay si fudud ku hesho Roberto Carlos oo ka mid ahaa difaacyadii ugu wanaagsanaa ee baasha bidix ee adduunka soo maray, hal-beegna looga dhigo laacib kasta oo halkaas ka ciyaara oo lagu tilmaamo in uu hibo leeyahay.
Roberto Carlos oo Inter Milan jooga, ayaa farxad la’aan noqday kaddib markii laga ciyaarsiiyey boos aan kiisii ahayn, iyadoo marna loo diray khadka dhexe, marna garabka weerarka.
Fabio Capello oo Real Madrid laylinayay Real Madrid waqtigaas, ayaa si degdeg ah ugu dhaqaaqay saxeexa Carlos, isagoo ka faa’iidaysanaya xaaladda qasan iyo deggenaansho la’aanta uu ku dareemayay San Siro Stadium.
“Sababtoo ah ma aanan rumaysnayn (in Carlos la iibin karayo), waxay iisoo direen fax uu ku cad yahay qiimihiisa, mana ahayn mid su’aal la gelin karayo, sidaa darteed, waxa aan wacay Madaxweynaha Real Madrid ee Lorenzo Sanz, waxaanan u sheegay in uu si toos ah ugu duulo Milan. Waxa aan u sharraxay in dhamaan kooxaha Talyaanigu ay u dhaqaaqayaan (Carlos) marka ay maqlaan warkan.